Dhagayso: Aqoonyahad kasoo jeeda Degmada Saaxo oo Gelinsoortimes Waraysi Xasaasi ah siisay. | Dhagayso: Aqoonyahad kasoo jeeda Degmada Saaxo oo Gelinsoortimes Waraysi Xasaasi ah siisay. – Latest News
« Dhagayso: Dhalinyarada Degmada Saaxo oo soo dhaweyay Hormarka Degmada ay gartay.
XOG: Dowladda Ethopia oo Xalinaysa Khilaafka Puntland iyo DFS+Madaxwayne Gaas oo… »
Dhagayso: Aqoonyahad kasoo jeeda Degmada Saaxo oo Gelinsoortimes Waraysi Xasaasi ah siisay.
Xilli wali ay soo baxayaan Hambalyada iyo Mashxaradda loo muujinaya aqoonsiga Dgameed oo ay heshay Degmada Saaxo ayaa waxaa hadana isa soo taray Waxgaradka, Aqoonyahanada, iyo Dhalinyarada kasoo jeeda Degmadaasi Xiriirka ay la soo sameenayaan Shabakadda Gelinsoortims si dareenkooda looga wareesto.
Aqoonyahanad Madiina Maxamed Warsame “Goonyar” oo ka mid ah Aqoonyahanada Rug cadaaga ah ee kasoo jeeda Degmada Saaxo isla markaana ka mid ah Dadkii mudada dheer u ololeenayay Hoormarinta Degmadaasi ayaa Waraysi Dhinacyo kala duwan taabanaya Siinaya Shabakadda Gelinsoortims.com.
Aqoonyahanad Madiina ayaa waxa sheegtay in degmada Mudoo badan ay ugu ololeenayeen sidii loo aqoonsan lahaa isla markaana ay dowladda Puntland uga mahad celinayaa Aqoonsiga dagmadeed ay siisay Saaxo.
Waxaa kale oo ay sheegtay in degmada xilligaan ay ka jiraan Baahiyo badan oo loo baahan yahay in la iska kaashado sidii la isaga caawin lahaa Hormarinta Degmad.
Halkaan ka dhagayso waraysiga aqoonyahad madiino oo dhamaystiran:
Degmada Saaxo ayaa dhawaan waxaa ay Golaha Wasiiradda Dowladda Puntland ay ku ansixiyeen in ay ka mid noqoto Degmooyinka Sharciga ee Gobolka Mudug waxaana sidaasi ay ku noqotay Degmada Shanaad ee Gobolka iyadoona Xilligaanba uu ka bilaawday Ololaha lagu hormarinayo Degmada si ay ula jaanqaado Degmooyinka ee Gobolka Mudug iyo Guud ahaan Degmooyinka Puntland.
Wariye Cumar Siciid C/raxmaan Laki Man
Xafiiska Wararka Gelisoortims.com ee Somaliya